Eksaody 30 - Ny Baiboly
Eksaody toko 30
Ny otely fandorana zava-manitra - Ny vola fandoa, antsasaky ny sikla - Ny diloilo fanosorana - Ny olona voatendry hanao ny tabernakla - Ny fitandremana ny sabata.
1Hanao otely fandorana emboka hianao, hataonao amin'ny hazo akasià; 2iray hakiho ny lavany, iray hakiho ny sakany, ka hitovy ny lafiny efatra, ary roa hakiho ny hahavony; hiray aminy ny tandrony. 3Hopetahanao takela-bolamena madio ny tampony, ny lafiny manodidina, ny tandrony, ary hasianao koronosy volamena manodidina izy. 4Hanaovanao masom-bolamena roa izy eo ambanin'ilay koronosy eo amin'ny rirany roa, hataonao amin'ny laniny roa, hidiran'ny bao hitondrana azy. 5Hataonao amin'ny hazo akasià ny bao, ary hopetahanao takela-bolamena izy. 6Io otely io dia hapetrakao manatrika ny efitra lamba izay eo anoloan'ny fiaran'ny vavolombelona, manatrika ny fanaovam-panavotana izay eo ambonin'ny vavolombelona, dia eo amin'izay hihaonako aminao. 7Eo no handoroan'i Aarona ny emboka; isa-maraina no handoroany azy, rahefa mamboatra ny lalampy izy; 8ary isaky ny àty takariva koa no handoroany azy, rahefa mametraka ny lalampy eo amin'ny fanaovan-jiro izy. Emboka manitra mandrakizay eo anatrehan'ny Tompo izany amin'ny taranakareo. 9Aza misy atolotrareo eo ambonin'io otely io, na ny zava-manitra tsy masina na ny sorona dorana na ny fanatitra, ary aza araraka eo ny fanatitra araraka. 10Eo amin'ny tandrok'io otely io no hanaovan'i Aarona ny fanoneram-pahotana indray mandeha isan-taona; ny ran'ny sorona fanoneram-pahotana no hanaovany ny fanoneram-pahotana ao, indray mandeha isan-taona, hatramin'ny taranaka mifandimby. Ho masina indrindra amin'ny Tompo io otely io.
11Ary niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 12Raha avy izay hanisanao ny zanak'Israely mba hahitana ny isany, dia samy hanome avotr'aina ho an'ny Tompo izy tsirairay avy rahefa hatao ny fanisana azy, mba tsy hisy loza manjo azy, amin'ny fanisana azy. 13Izao no haloan'izay rehetra anatin'ny voaisa: antsasaky ny sikla araka ny sikla masina izay roa-polo gerà; antsasaky ny sikla no ho fanatitra halaina ho an'ny Tompo. 14Samy handoa ny hajian'ny Tompo avokoa ny lehilahy anatin'ny voaisa rehetra hatramin'ny roapolo taona no ho miakatra. 15Ny mpanan-karena tsy handoa mihoatra, ny mahantra tsy handoa latsaka ny antsasaky ny sikla amin'ny fandoavana ny hajian'ny Tompo ho avotry ny ainareo. 16Horaisinao amin'ny zanak'Israely ny vola avy amin'izany avotra izany ka hoenti-manao ny raharaha momba ny trano lay fihaonana. Dia ho antoka eo anatrehan'ny Tompo izany, ho an'ny zanak'Israely hanavotana ny ainy.
17Niteny tamin'i Moizy koa Iaveh nanao hoe: 18Hanao tavy varahina, misy faladiany varahina, hatao fiafanana hianao, ka hapetrakao eo anelanelan'ny trano lay fihaonana sy ny otely, 19dia hasianao rano, hangalan'i Aarona sy ny zanany hanasany ny tànany aman-tongony. 20Fa hiafana amin'io rano io izy, mba tsy ho faty, na rahefa hiditra amin'ny trano lay fihaonana, na rahefa hanatona ny otely hanao ny raharahany hampanetona sorona amin'ny Tompo. 21Hanasa ny tongony aman-tànany izy, ka tsy ho faty izy. Lalàna mandrakizay ho azy ireo izany, dia ho an'i Aarona sy ny taranany amin'ny taona mifandimby.
22Hoy koa Iaveh tamin'i Moizy: 23Makà amin'ny zava-manitra izay tsara indrindra, mira madio diman-jato sikla, ary ny antsasak'izany, dia sinama mamerovero dimampolo sy roan-jato sikla, veromanitra dimampolo sy roan-jato sikla, 24kasa diman-jato sikla, araka ny sikla masina, ary diloilon'oliva iray hina; 25ka amboary izany ho diloilo hanaovana ny fanosorana masina; ho zava-manitra voaharoharo araka ny asan'ny mpahay zava-manitra; dia izany no diloilo hanaovana ny fanosorana masina. 26Io no hanosoranao ny trano lay fihaonana, ny fiaran'ny vavolombelona, 27ny latabatra mbamin'ny fanaka momba azy rehetra, ny fanaovan-jiro mbamin'ny fanaka momba azy, ny otely fandoroan-java-manitra, 28ny otely fanaovan-tsorona dorana mbamin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy varahina mbamin'ny faladiany. 29Hohamasininao ireo dia ho masina indrindra ary ho masina avokoa izay hikasika azy. 30Hohosoranao koa Aarona sy ny zanany, ary hohamasininao izy, mba ho mpisorona hanao fanompoana ahy. 31Mitenena amin'ny zanak'Israely ka lazao hoe: Ho diloilo fanaovana fanosorana masina izany ho ahy, hatrany amin'ny taranaka mifandimby. 32Tsy hararaka amin'ny tenan'olona izany, ary hamorona hafa tahaka an'io hianareo amin'izay zavatra hamoronana an'io, fa zava-masina izany, ka tsy maintsy hataonareo ho zava-masina. 33Na zovy na zovy hanamboatra tahaka an'io na hanosotra izany amin'olona tsy fanosotra azy, dia hofongorana tsy ho eo amin'ny fireneny.
34Hoy Iaveh tamin'i Moizy: Makà zava-manitra, ditin-kazo, ongila mani-pofona, galbanoma, zava-manitra sy emboka tsy mifaho zavatra hafa, izany rehetra izany ampitovio fatra. 35Dia ireo no hanamboaranao zava-manitra hanaovana ny fanembohana, voaharoharo araka ny asan'ny mpahay zava-manitra; asio sira izy, ary aoka ho madio sy masina. 36Torotoroy hanjary vovony izy, dia ametraho eo anoloan'ny vavolombelona ao an-trano lay fihaonana izay hihaonako aminao. Ho zava-masina indrindra izany. 37Izany zava-manitra hataonareo izany dia tsy ho azonareo anaovana mitovy aminy ho anareo, fa hataonareo ho zava-masina ho an'ny Tompo. 38Ka na zovy na zovy hanao mitovy amin'izany hanamboloany ny haniny, dia hofongorana tsy ho eo amin'ny fireneny. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0119 seconds